आफैँले डण्ठिनी भनेका प्रहरीसँग कुम जोडेर आस्थाले लेखिन्– बदलाको कुराभन्दा क्षमा ठूलो ! - News20 Media
March 8, 2020 March 8, 2020 N20LeaveaComment on आफैँले डण्ठिनी भनेका प्रहरीसँग कुम जोडेर आस्थाले लेखिन्– बदलाको कुराभन्दा क्षमा ठूलो !
काठमाडौं। विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा प्रहरीसँग नोकझोंक गरेपछि केही अघि गायिका आस्था राउत विवादित बनिन्। उनलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान थालेपछि भने प्रहरी विवादमा तानियो। प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराइयो र चार हजार रूपैयाँ धरौटी तिरेपछि रिहा भइन्।
आज भने गायिका राउतले दुई महिला प्रहरीको बीचमा उभिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना दिएकी छन् । प्रहरीसँग आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध रहेको सन्देश दिन विमानस्थलका दुई महिला प्रहरीसँग तस्वीर खिचेर पोष्ट गरेको आस्थाले बताइन् ।
को छ यहाँ घटी बढी, जोख्न छैन तुलो…
बदलाका कुराभन्दा क्षमा गर्नु ठूलो…
भन्दै आस्थाले ११० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना दिएकी हुन्। “त्यो घटनामा पहिले प्रहरीले गल्ती गर्‍यो। त्यसपछि आवेगमा आएर मेरो तर्फबाट पनि गल्ती भयो। अब त्यसलाई इगो बनाउनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो”, उनले भनिन्। प्रहरी-प्रशासनभित्र मै हुँ भन्ने भावना भएका कर्मचारी अझै रहेको भन्दै उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भने आफूले सधैँ सम्मान गर्ने बताइन्। प्रहरीले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने उनी बताउँछिन्।